लगातार बढ्दै आएकाे सुनकाे भाउ आज साेमबार भने घट्यो, यस्ताे छ आजकाे भाउ – Sapana Sanjal
July 12, 2021 128
Sapana Sanjal : लगातार बढ्दै आएकाे सुनकाे भाउ आज साेमबार भने घट्यो, यस्ताे छ आजकाे भाउ । आज सोमबार नेपाली बजारमा सुनचाँदीको मुल्य घटेको छ । आज छापावाला सुन आज तोलामा २ सय रुपैयाँ घटेकाे नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।
आज छापावाला सुन ताेलामा २ सय रुपैयाँले घटेर प्रतितोला ९२ हजार २ सय रुपैयाँमा कारोबार भैरहेको छ । त्यस्तै आज तेजावी सुन पनि तोलामा २ सय रुपैयाँ घटेर प्रतितोला ९१ हजार ७ सय रुपैयाँमा कारोबार भैरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।
त्यस्तै आज चाँदीकाे मूल्य पनि तोलामा ५ रुपैयाँ घटेको छ । आज चाँदी प्रतितोला १ हजार ३ सय १० रुपैयाँमा कारोबार भैरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । **थप जानकारीका लागि तल क्लिक गर्नुहाेस्**
Prevटु,क्रा–टु,क्रा पारी सिमेन्टले प्लास्टर गरिएकाे सुजिताको श’व शौचालयको ट्याङ्की भित्र भेटियो
Nextयस्तो घरमा ४ वर्षको बालक एक्लै ! किन यस्ताे भयाे ? स्थानियले खाेले बालक एक्लै हुनुकाे रहस्य, हेर्नुहाेस भिडियो सहित